कसरी इन्स्टाग्राममा हेरिएको हटाउने (solutions समाधानहरू) | मोबाइल फोरम
डेनियल टेरासा | | इन्स्टाग्राम, सामाजिक सञ्जालहरू
जेसुकै कारणले गर्दा, धेरै अवसरहरूमा हामी "सन्देशहरू" हामीमा प्राप्त भएका सन्देशहरूमा छोड्न चाहँदैनौं इन्स्टाग्राम। यस पोष्टमा हामी ती कार्यहरू गर्न सक्ने विभिन्न तरिकाहरू विश्लेषण गर्न गइरहेका छौं। हामी तपाईंलाई भन्छौं कसरी इन्स्टाग्राम मा देखा हटाने को लागी।
सबै भन्दा पहिले, यो निर्दिष्ट गर्नु पर्छ वास्तवमा यो कलइन्ड के हो र यसको फंक्शन के हो। मोटामोटी रूपमा भन्नुपर्दा, यो "देखीएको" भनेको इन्स्टाग्राममा निलो "डबल चेक" व्हाट्सएपमा के हो भनेर भन्न सकिन्छ। दुबै केसहरूमा, प्रणाली जसले हामीलाई यो जान्नको लागि कि छविहरू वा सन्देशहरू पठाइएको छ र प्राप्तकर्ताले प्राप्त गरेको छ भनेर जान्न अनुमति दिन्छ। र उनीहरूलाई वेवास्ता गरियो कि हुँदैन भनेर पनि जान्न।
यो एक धेरै उपयोगी र व्यावहारिक प्रणाली हो, ती अवसरहरूमा बाहेक जब सन्देश प्राप्तकर्ताहरूको रूपमा हामी यो जानकारीलाई ज्ञात हुन चाहँदैनौं। यो, मानिने सबै चीजहरू, हाम्रो गोपनीयता सुरक्षित राख्नको लागि एक अर्को तरीका हो। व्हाट्सएपमा यो विकल्पलाई असक्षम पार्न पर्याप्त छ, तर इन्स्टाग्राममा हामीसँग यो सम्भावना छैन। त्यसो भए के गर्ने? इन्स्टाग्राममा हेरिएको कसरी हटाउने? आउनुहोस् हामी तीन सबैभन्दा प्रभावकारी विधिहरू कुन हुन्:
1 विधि १: मोबाइलमा अधिसूचनाहरू सक्रिय गर्नुहोस्
2 विधि २: "हवाइजहाज मोड" प्रयोग गर्नुहोस्
3 विधि:: नदेखिने
विधि १: मोबाइलमा अधिसूचनाहरू सक्रिय गर्नुहोस्
ईमेलबाट तिनीहरूलाई पढ्न इन्स्टाग्राम अधिसूचनाहरू सक्रिय गर्नुहोस् (र "हेरे")
यो विधि दुबै एन्ड्रोइड र आईफोन प्रयोगकर्ताहरूको लागि उपलब्ध छ। हाम्रो उपकरणमा इन्स्टाग्राम डाउनलोड गर्दा, सूचनाहरू पूर्वनिर्धारितद्वारा सक्रिय हुन्छन्। जे भए पनि, हामी पक्का गर्न सक्छौं फेरी कन्फिगरेसन जाँच गर्दै। यी अनुसरण गर्नका लागि यी चरणहरू छन्:
तपाईंको इन्स्टाग्राम प्रोफाइल प्रविष्ट गर्नुहोस्। माथिको दायाँ कुनामा, त्यहाँ विकल्प चयन गर्न तीन तेर्सो पट्टिहरूको साथ प्रतिमामा क्लिक गर्नुहोस् "सेटिंग".
त्यसपछि क्लिक गर्नुहोस् "सूचनाहरू" र त्यसपछि भित्र "प्रत्यक्ष सन्देश".
त्यहाँ तपाईं सूचनाहरू सक्रिय छ कि छैन भनेर जाँच गर्न सक्नुहुनेछ: सन्देश अनुरोधहरू, सन्देशहरू जुन "मुख्य" बाट आउँदछन् र ती "सामान्य" बाट आएका हुन्। यदि तिनीहरू भित्र देखा पर्दछ निलो रंग यसको मतलब यो छ कि यी सूचनाहरू सक्रिय छन्। अब यो छनौट गर्ने सवाल हो जुन हामी यो जारी राख्न चाहन्छौं र कुन चाहिँदैन।
तपाईं पुग्दासम्म तल स्क्रोल गर्नुहोस् "अतिरिक्त प्रणाली कन्फिगरेसन विकल्पहरू" तपाईंको प्राथमिकता अनुसार विकल्पहरूको यो चयन गर्न।
हामी यसबाट के पाउँछौं? धेरै सरल: अधिसूचनाहरू सक्रिय राखेर, तिनीहरू तपाईंको ईमेल इनबक्समा पहिले आउनेछन्। त्यहाँबाट, तिनीहरूलाई खोल्न बिना र यसैले दृश्यको रूपमा देखा पर्दछ, तपाईं तिनीहरूलाई पढ्न सक्नुहुन्छ, तिनीहरूलाई उत्तर दिनुहोस् (यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने) र तिनीहरूलाई मेटाउनुहोस्।
महत्वपूर्ण: यो काम गर्नका लागि र यसैले "सन्देश" मार्क व्यक्तिको आँखामा देखा पर्नबाट रोक्नुहोस् जसले हामीलाई सन्देश पठाउँदछन्, तपाईंले हुनु पर्छ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं च्याट मौन छैन.
विधि २: "हवाइजहाज मोड" प्रयोग गर्नुहोस्
तपाईंको मोबाइलमा हवाइजहाज मोडको एक थप प्रयोग: इन्स्टाग्राम सन्देशहरूमा "देखीएको" लुकाउनुहोस्
त्यो को रूप मा सरल। धेरै व्यक्तिहरूलाई यो थाँहा छैन, तर यो समारोह जुन सबै मोबाइल फोनहरू पहिल्यै सामेल छन् हाम्रो उद्देश्यका लागि धेरै उपयोगी हुन सक्छ। यसले कसरी इन्स्टाग्राममा देखी हटाउने भन्ने प्रश्नको उत्तर दिदैन तर जे भए पनि समस्या समाधान गर्नुहोस्.
यसले कसरी काम गर्दछ? मोबाइल putting मा राखेरहवाइजहाज मोड" इन्टर्नेट जडान र अन्य फोन प्रकार्यहरू अवरोध छन्। त्यसोभए इन्स्टाग्राम अनुप्रयोग प्रविष्ट गर्ने र सन्देशहरू समीक्षा गर्ने समय आएको छ "देखीएको" देखा पर्दा र कुनै ट्रेस नगरीकन।
वास्तवमा, विचार सरल छ र विधिले काम गर्दछ, तर यो उत्तम समाधान होईन। यदि तपाईं यसलाई प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ ट्रेस छोड्नु बिना इन्स्टाग्राम सन्देशहरू पढ्न ट्रिक गर्नुहोस्तपाईंलाई थाहा हुनुपर्दछ कि ती सबै तपाईंले "इन्टरनेट जडान पुनःसक्रिय पार्ने क्षण" को साथ चिह्नित हुनेछ। अर्को शब्दहरुमा: "हवाइजहाज मोड" को सट्टा "हामीले देखेको" बाट जोगिन के गर्दैछ हामी के गर्न जाँदैछौं जुन ढिलो देखा पर्दछ।
तपाईंको इन्स्टाग्राम सन्देशहरू "इनकग्निटो" अनदेखीको साथ पढ्नुहोस्
नदेखिने (जुन अंग्रेजीमा शाब्दिक अर्थ "देखिएको छैन") हो, एक व्यावहारिक र चाखलाग्दो निःशुल्क अनुप्रयोग हो। शायद एक इन्स्टाग्राममा "देखाएको" हटाउने कुनै तरिका खोज्न आउँदा हामीलाई सबैभन्दा धेरै मद्दत गर्ने छ।
यो Google Play बाट एन्ड्रोइडको लागि नि: शुल्क डाउनलोड गर्न सकिन्छ। एक पटक हाम्रो उपकरणमा स्थापना भयो, यो हामी यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने छौं:
पहिले तपाईंले यो लिंकमा अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुपर्नेछ: नदेखिने.
स्थापना पछि, हामीले हाम्रो फोनमा सामाजिक कुराकानी अनुप्रयोगहरू छनौट गर्नुपर्नेछ जहाँ हामी नदेखिने प्रकार्यहरू प्रस्तुत गर्न चाहान्छौं। यस केसमा तपाईले गर्नु पर्छ इन्स्टाग्राम छनौट गर्नुहोस्.
अर्को तपाइँसँग छ नदेखिएको पहुँच प्राधिकृत गर्नुहोस् सूचनाहरूमा।
यस तरिकाले, प्रत्येक चोटि तपाईले पहिले मोबाईलमा चिन्ह लगाएको अनुप्रयोगमा तपाईको मोबाईलमा सूचनाहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ, ती पहिला अदृष्यको "फिल्टर" बाट पास हुनेछन्, जसले तपाईको गतिविधि सुविधाजनक ढंगमा लुकाउनको लागि ध्यान दिनेछ। यसैले, तपाई "इन्स्टाग्राम सन्देशहरू" लाई "देखेको" मार्कर बिना नै पूर्ण रूपमा सावधानी र सुरक्षित तरीकाले पढ्न सक्षम हुनुहुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: मोबाइल फोरम » सामाजिक सञ्जालहरू » इन्स्टाग्राममा "देखे" कसरी हटाउने